तपाइँको स्मार्टफोनमा Spotify को सक्दो फाइदा लिन छवटा तरिकाहरू ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | सफ्टवेयर, ट्यूटोरियलहरू
लाखौं प्रयोगकर्ताहरूको जीवनमा स्पोटिफाई एक आवश्यक अनुप्रयोग भएको छ। यसको लागि धन्यबाद हामीसँग लाखौं गीतहरू छन्, जुन डेस्कटप संस्करण र स्मार्टफोन संस्करणमा दुबै पहुँच गर्न सकिन्छ। तपाईं धेरैलाई स्ट्रिमिंग प्लेटफर्ममा एक खाता हुन सक्छ, यद्यपि तपाईं त्यस खाताबाट अधिक प्राप्त गर्दै हुनुहुन्न।
भाग्यवस, त्यहाँ हामी प्रयोग गर्न सक्नुहुने धेरै तरिकाहरू छन् Spotif बाट अधिक प्राप्त गर्न। यस तरीकाले हामी स्ट्रिमिंग प्लेटफर्मको प्रयोग हाम्रो फोनमा अझ राम्रोसँग गर्न लागिरहेका छौं। पक्कै तपाईंको लागि त्यहाँ केही उपयोगी चाल छ।
1 अधिक सही खोजीहरू
2 Spotif मा स्ट्रीमि quality क्वालिटी
3 डाटा बचत गर्दै
4 टाइमर संगीत बन्द गर्न
5 Spotify मा क्यास खाली गर्नुहोस्
6 कलाकारहरू रोक्नुहोस्
7 गीतको लिरिक्स हेर्नुहोस्
8 भिडियो क्लिपहरू हेर्नुहोस्
अधिक सही खोजीहरू
Spotif मा उपलब्ध संगीत क्याटलग विशाल छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तसर्थ, यो सम्भव छ कि केहि अवसरमा हामी अनुप्रयोगमा अझ सटीक खोजी गर्न चाहन्छौं। हामीमा यसमा विभिन्न मापदण्डको आधारमा संगीत खोजी गर्ने सम्भावना छ, जुन वर्ष गीत वा एल्बम रिलीज गरिएको थियो, वा विधा। यसैले, यदि हामी एक विशिष्ट संगीत विधामा रुचि राख्दछौं भने, हामी त्यो संगीत सजिलैसँग भेट्न सक्दछौं। हामीले भर्खर केहि खोज शब्द प्रयोग गर्नुपर्दछ:
बर्ष: यदि हामी एक विशेष वर्षबाट संगीत खोज्न चाहन्छौं भने हामी यसलाई धेरै समस्या बिना नै गर्न सक्दछौं। हामीले स्पोटिफाइमा केवल एउटा मात्र कुरा लेख्नुपर्दछ निम्न "वर्ष: २०१०" प्रत्येक केसमा, जहाँ मैले २०१० राखेको छु केवल तपाईलाई रुचिको वर्ष राख्नु पर्छ। हामी वर्षौं दायराका लागि पनि खोजी गर्न सक्दछौं, जुन यस्तो अवस्थामा "वर्ष: २००-2010-२०१2010" हुनेछ।
लिङ्ग: हामी संगीत शैलीमा आधारित गीतहरू खोज्न चाहन्छौं, यस अर्थमा यो विचार बर्षको जस्तै छ, त्यसैले हामी स्पोटिफाइमा "शैली: रक" प्रविष्ट गर्न सक्छौं र यस विधामा आधारित परिणामहरू देखा पर्नेछ।
प्रसिद्ध: यदि हामी एक विशिष्ट कलाकार द्वारा संगीत खोज्न चाहानुहुन्छ, हामीले केवल उही सूत्र प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन हामीले अहिले सम्म "कलाकार: कलाकारनाम" प्रयोग गर्यौं।
रेकर्ड लेबल: यो प्यारामिटरको लागि धन्यवाद हामी एक विशेष रेकर्ड कम्पनी अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको सबै संगीतहरू फेला पार्न सक्छौं। यो केहि विशिष्ट रेकर्ड कम्पनीहरूको लागि रुचि हुन सक्छ।
यस तरिकाले, हामी केहि बनाउन सक्षम हुनेछौं खोजले हामीलाई अधिक रोचक परिणाम दिन्छ हाम्रो लागि सँधै। संगीतको आविष्कार गर्ने यो राम्रो तरिका हो जुन हामीले स्पोटिफाइमा फेला पार्दछौं।
Spotif मा स्ट्रीमि quality क्वालिटी
जब हामी फोनमा संगीत सुन्छौं, हामी गुणस्तर उत्तम संभव भएको चाहान्छौं। यद्यपि यो ध्यानमा राख्नु पर्छ Spotify मा संगीत को उच्च गुणवत्ता अधिक डाटा उपभोग गर्नेछत्यसकारण, यो विकल्प हुनु उत्तम हुन्छ जब हामी वाइफाइ नेटवर्कमा जडित छौं। अन्यथा, हामी हेर्नेछौं कि कसरी हाम्रो दर खपत हुन्छ (जब सम्म तपाईं असीमित दर छैन)। यस अवस्थामा तपाईले यो विकल्पमा शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ।
स्ट्रिमि quality गुण परिमार्जन गर्न, उच्च चयन गरेर, हामी कन्फिगरेसनमा जानु पर्छ। हामी स्क्रिनको माथि दायाँपट्टि कोग्व्हील आइकनमा क्लिक गरेर यो गर्छौं। कन्फिगरेसन भित्र हामीसँग मात्र स्लाइड जब सम्म तपाइँ स्ट्रिमि quality गुणवत्ता खण्ड मा पुग्नुहुन्न। हामी प्लेटफर्ममा संगीत सुन्दा राम्रो अनुभवका लागि त्यहाँ हामी उच्च गुणहरू छनौट गर्दछौं।
दुर्भाग्यवश, उच्च गुणवत्ता छनौट गर्ने सम्भावना केहि रहेको छ स्पोटिफाईमा प्रीमियम खाता भएका प्रयोगकर्ताहरूको लागि आरक्षित। यदि तपाईंसँग यो खाता छैन भने, तपाईं केवल स्वचालित गुणवत्तामा संगीत प्ले गर्न सक्नुहुनेछ, जुन खातामा पूर्वनिर्धारित रूपमा आउँदछ।
डाटा बचत गर्दै
स्पोटिफाई एउटा अनुप्रयोग हो जुन फोनमा धेरै डाटा खान्छ, यो केहि कुरा हामी जान्दछौं, विशेष गरी यदि हामीसँग संगीतको उच्च गुणस्तर छ भने, अघिल्लो भागमा जस्तै। सम्भवतः कुनै खास समयमा तपाईं कम उपभोग गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै जब तपाईंको दर प्रयोग भइरहेको नजिक छ। यस्तो अवस्थामा, तपाईं अनुप्रयोगमा डाटा बचत सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ.
डाटा बचत गर्नु भनेको संगीतको गुणवत्ता कम हुनेछ, कम मोबाइल डाटा खपत गर्ने। यसलाई सक्रिय गर्नका लागि हामी स्पोटिफाइ कन्फिगरेसनमा प्रवेश गर्दछौं। यस भित्र, हामी पहिलो खण्डको रूपमा डेटा बचत पाउँछौं। केवल स्विच फ्लिप गर्नुहोस् त्यहाँ छ, ताकि यो पहिले नै अनुप्रयोगमा काम गरिरहेको छ। जब हामी यसलाई प्रयोग गर्न रोक्न चाहन्छौं, हामीले यसलाई बन्द गर्नुपर्दछ।
कसरी तपाईं स्पोटिफाइमा सबैभन्दा धेरै सुन्नुभएको गीतहरूको साथ प्लेलिस्टहरू सिर्जना गर्ने
टाइमर संगीत बन्द गर्न
यो भर्खरको फंक्शन हो जुन अनुप्रयोगले प्रस्तुत गरेको हो। Spotify एक समय सीमा परिचय गर्न हामीलाई यस प्रकारले अनुमति दिन्छ ताकि संगीत रोकिनेछ, त्यो हो, हामी अनुप्रयोगलाई minutes मिनेट भित्र संगीत बजाउन रोक्न सक्छौं। एउटा समारोह जुन व्यक्ति सुन्न जब तिनीहरू संगीत सुन्छन् को लागी उपयोगी हुन सक्छ, उदाहरण को लागी। त्यसोभए उनीहरूलाई निदाउनको लागि सजिलो हुन्छ, अनुप्रयोग बन्द नगरी चिन्ता बिना।
जब हामी संगीत सुन्दछौं, हामीले "अब प्ले गर्दै" स्क्रिनमा जानुपर्नेछ र मेनूमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। अन्त्य तिर विकल्पहरू मध्ये एक स्लीप टाइमर हो। हामी यहाँ समय विकल्प छनौट गर्दछौं जुन हामीलाई सब भन्दा चासो छ, minutes मिनेट देखि एक घण्टा सम्म। यसप्रकार, हामीले यस टाईमरलाई स्पोटिफाईमा सेट गरिसकेका छौं र हामी पूर्ण शान्तिको साथ सुत्न सक्छौं।
Spotify मा क्यास खाली गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको एन्ड्रोइड फोनमा प्राय: Spotify प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँले त्यो याद गर्नुहुनेछ तपाईं क्यास को एक ठूलो रकम जम्मा समाप्त। यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईको स्मार्टफोनमा धेरै ठाउँ खपत हुन्छ, र फोनमा भएका मानिससँग मेमरीको मेहनत पनि अलि बढी हुन सक्छ। त्यसकारण, अनुप्रयोगमा क्यास खाली गर्ने सम्भावना छ। त्यस बिन्दुमा केहि खाली ठाउँ खाली गर्नुहोस्।
हामीले भर्खर Spotify सेटिंग्स प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। यस भित्र तपाईले क्याच सेक्सनमा स्लाइड गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ क्याच मेटाउने विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। यस तरीकाले हामी फोनमा थोरै ठाउँ खाली गरेर यसलाई मेटाउँछौं। धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो धेरै सहयोगी हुन सक्छ।
कसरी Spotif लाईट, Spotif को त्रिफाइ संस्करणको प्रयोग गरेर डाटा बचत गर्ने
अन्तमा, हामीसँग हालसालका अन्य कार्यहरू छन् जुन Spotify मा समाहित गरिएको छ। यो सम्भव छ कि त्यहाँ एक कलाकार छ जसको लागि तपाईंलाई डरलाग्दो शौक छ। कुरालाई अझ नराम्रो बनाउनको लागि, समय-समयमा तपाईंले उनीहरूका गीतहरू विज्ञापनमा पाउनुहुनेछ वा अनुप्रयोगमा सिफारिस गरिएको छ, जो कष्टकर छ। भाग्यवस, त्यहाँ अवरुद्ध को समारोह छ, त्यसो भनेर कलाकारले तपाईंको लागि अनुप्रयोगमा आउन रोक्छ।
यस प्रकार्य प्रयोग गर्ने तरीका धेरै सजिलो छ। हामीले भर्खरै गर्नु पर्छ प्रश्नमा कलाकार फेला पार्नुहोस् र Spotif मा आफ्नो प्रोफाइल प्रविष्ट गर्नुहोस्। स्क्रीनको शीर्षमा, फलो बटनको छेउमा, तीन ठाडो थोप्लाहरू देखा पर्छन् जुन हामीले थिच्नु पर्छ। धेरै विकल्पहरू देखा पर्नेछन्, जस मध्ये एउटा ब्लक गर्नु हो। हामीले केवल यो विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यस तरिकाले, कलाकारले अनुप्रयोगमा हाम्रो लागि हराउनेछ भने।
गीतको लिरिक्स हेर्नुहोस्
एक सुविधा जुन Spotify मा केहि समयको लागि उपलब्ध छ गीतको लिरिक्स हेर्नको लागि हो। जब हामी एउटा गीत सुन्दछौं, हामी भन्न सक्दछौं कि गीतको गीत के हो, जुन धेरै केसहरूमा चाखलाग्दो हुन सक्दछ (हामी भाषा सिक्दै छौं, हामी पाठलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौं, आदि)। भाग्यवस अनुप्रयोगसँग त्यस्तो सुविधा उपलब्ध छ। यस सम्बन्धमा हामीले के गर्नुपर्ला?
जब हामी अनुप्रयोगमा एक निश्चित गीत सुन्दछौं, हामीले स्क्रिनको तल रहेको बारमा क्लिक गर्नुपर्दछ। त्यसैले हामी गर्न छ तल सार्नुहोस, गीतको बोलहरू, साथै यसको बारेमा केही इतिहासहरू हेर्न सक्षम हुन। केहि सरल चरणहरूमा हामीसँग यस जानकारीको पहुँच छ, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ।
दुर्भाग्यवश, दिमागमा राख्नुहोस् Spotif मा सबै गीतहरूले हामीलाई यो सम्भावना प्रदान गर्दैन। यो जीनियसको साथ एक सहकार्य हो, जुन एक वेबसाइट हो जहाँ हामी लाखौं गीतहरूको लय पाउन सक्छौं। यद्यपि सँधै सबै पाठहरू हुँदैनन्। केही गीतहरूको लागि, विशेष गरी यदि तिनीहरू धेरै नयाँ छन् भने, यो अझै रिलीज हुन सक्दैन। कम लोकप्रिय कलाकारहरूमा पनि यो हुन्छ कि त्यहाँ केहि छैन।
भिडियो क्लिपहरू हेर्नुहोस्
Spotify को प्रीमियम संस्करण मा उपलब्ध छ कि एक सुविधा गीतहरूको भिडियोहरू हेर्नको लागि हो। हामीले केवल यी भिडियोहरू फेला पार्न अनुप्रयोगमा सर्च इन्जिनको प्रयोग गर्नुपर्दछ। भिडियो क्लिपहरूको साथसाथै, हामी अनुप्रयोगको यस भागमा अन्य सामग्रीहरू फेला पार्दछौं। त्यहाँ कागजातहरू, गीत वा भिडियो सिर्जना गर्न भिडियोहरू, र अधिक हो। त्यसोभए तिनीहरू धेरै कलाकारहरूमा अप टु डेट रहन उत्तम तरिका हुन्।
तपाईंले भर्खरै आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा अनुप्रयोग खोल्नुपर्नेछ र खोज इञ्जिन प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यहाँ, तपाईंले भिडियोमा स्लाइड गर्नु पर्छ, जहाँ हामी त्यस खण्डमा प्रवेश गर्छौं। यहाँ हामी सबै कुरा देख्न सक्षम हुनेछौं किनकि भनिएको सामग्रीमा। त्यहाँ चित्रित शो वा विशेष एपिसोडहरू हुन सक्छन् जुन त्यस समयमा हाम्रो लागि चासोको विषय हुन सक्छ। पहुँच गर्न धेरै सजिलो छ र यस तरिकामा भिडियो सामग्रीको ठूलो मात्राको आनन्द लिनुहोस्। जे होस् याद राख्नुहोस्, यो स्पोटिफाईमा प्रीमियम खाता भएका प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध कार्य हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » तपाईंको स्मार्टफोनमा स्पोटिफाईबाट अधिक प्राप्त गर्न युक्तिहरू
एसपीसी भिसम, हामी यो स्मार्ट भिडियो इन्टरकम विश्लेषण गर्दछौं